အကောင်းဆုံး Medical CE အမျိုးသမီးဝတ်ဆံပင်ဖယ်ရှားစက် / diode 808 laser reviews ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ | KES
Q Nd Yag Laser ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်
အပိုင်းအစငယ် CO2 လေဆာစက်
Ultrasonic Cavitation စက်
HIFU Facelift စက်
Medical CE အမျိုးသမီးဆံပင်ဖယ်ရှားစက် / diode 808 လေဆာရောင်ခြည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Diode အိတ်ဆောင်လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားစက်, Diode လေဆာစနစ်စက်ဂျာမန်လေဆာရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်သူ Wavelength 808nm
ဆံပင်လေဆာဖယ်ရှားရေး, diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေးစက်တွေ
ဆံပင် follicles တည်ရှိရာအရေပြားတွင်းသို့နက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်နိုင်ရန်အတွက် 808nm diode ၏အကောင်းဆုံးဆံပင်ဖယ်ရှားရေးလှိုင်းအလျားကိုအသုံးပြုသည်။ ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် fluence အနိမ့်အမြင့်များ၊ ထပ်ခါတလဲလဲပြောင်းမှုများကြောင့်ဆံပင် follicles နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နှစ်ခုလုံး၏အပူချိန်ကို ၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်စေသည်။ ဤသည်ပိုမိုတဖြည်းဖြည်းအပူဖြန့်ဝေဆံပင် follicles ကိုအပူဖို့ရေလှောင်ကန်အဖြစ် chromophores ကိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်သျှူးသို့အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဆံပင် follicles အားဖြင့်တိုက်ရိုက်စုပ်ယူသောအပူစွမ်းအင်နှင့်အတူ, follicles ကိုပျက်စီးစေခြင်းနှင့်ပြန်လည် - ကြီးထွားမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ 808nm diode လေဆာစက်သည်တစ်သျှူးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲဆံပင် follicles melanocytes အထူးသဖြင့်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ လေဆာရောင်ခြည်ကို Melanin ရှိဆံပင်ပုံစံနှင့်ဆံပင်ပုံစံများကစုပ်ယူနိုင်ပြီးအပူအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အပူချိန်မြင့်တက်လာသောအခါဆံပင် follicles ၏သဘာဝဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကာလပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့်အရှင်အမြဲတမ်းဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်သောဆံပင် follicles ဖွဲ့စည်းပုံ, ပျက်စီးစေခြင်းငှါအလုံအလောက်မြင့်မားတဲ့အခါ။
လေဆာအမျိုးအစား High Power Diodes / Laser Hair Removal Machine ကုန်ကျစရိတ်
လှိုင်းအလျား 808nm Standard755nm, 1064nm, Tri-wavelength optional ကို
ပြောင်းလဲနိုင်သောအစက်အပြောက်အရွယ်အစား9* 9, 12 * 12, 12 * 18 optional ကို
အစက်အပြောက်အရွယ်အစား 12 * 12mm²
အထပ်ထပ်နှုန်း 10HZ အထိ
တုပ်ကွေး 10-125J / CM2
Pulse အကျယ် 10-400ms
ပလက်ဖောင်းသတ်မှတ်ချက် 100-240VAC 12A MAX / 50-60HZ
အသားတင်အလေးချိန် ၂၇ ကီလိုဂရမ်
အတိုင်းအတာ 397mm * 357mm * 463mm
လျှောက်လွှာ ၏ 808nm ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း alma lasers diode laser: အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောအမြဲတမ်းဆံပင်ကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ မျက်နှာ၊ လက်မောင်း၊ လက်မောင်း၊ လက်မောင်း၊ ရင်ဘတ်၊ ကျော၊ ရေကူး၊ ခြေထောက်စသည့်နေရာများတွင်မလိုလားအပ်သောဆံပင်များအတွက်သင့်တော်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အရေပြားအသစ်များနှင့်အသားအရေတင်းကျပ်မှုရှိသည်။
၁) အရောင်ခြယ်ထားသောဆံပင်နှင့်အရေပြားအမျိုးအစားအားလုံးအပေါ် - အညိုရောင်အရေပြားအပါအ ၀ င်အမြဲတမ်းဆံပင်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
၂) နာကျင်မှုကင်းသောဆံပင်မရှိ - သက်သောင့်သက်သာရှိသောဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း
·Safe နှင့်အဆင်ပြေ, နှစ်ဆအကျိုးကျေးဇူးများ
လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားစက်စက်နှစ်ဆနှင့် TEC Active Cooling Modular ဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်သည်အအေးခံသက်ရောက်မှုနှစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Double TEC သည် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားရှိရေအပူချိန်သည် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်တွင်ရှိလျှင်နီလာသည်စင်ကြယ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အန္တရာယ်အကင်းဆုံးနှင့်အသက်သာဆုံးကုသမှုကိုရနိုင်သည်။ စူပါကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်ရသောအချိန်သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုနှစ်ဆတိုးစေသည်။
·Easy Touch နှင့်အသိဉာဏ်ရှာဖွေသည့်စနစ်
Laser ဆံပင်ဖယ်ရှားသည့်စက်သည်လွယ်ကူစွာထိတွေ့နိုင်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်သုံးစွဲသူများအားအရေပြားအမျိုးအစားများနှင့်ဆံပင်အရောင်အမျိုးမျိုးအတွက်အကြံပြုထားသောချိန်ညှိချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ စမတ်အမှားများကိုရှာဖွေခြင်းစနစ်သည်ပန်ကာများ၊ စုပ်စက်နှင့်အအေးပေးစနစ်ကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်လုပ်ငန်းခွင်မှတ်စုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်၏အချိန်နှင့်ကုန်ကျငွေတစ်ဝက်ကိုရောင်းပြီးသည့်နောက်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ပို့ခြင်း 3-4 နေ့ရက်များအတွင်း
တင်ပို့ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် (DHL / TNT / UPS / FedEx)၊ လေကြောင်းဖြင့်၊ ပင်လယ်ပြင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု / အာမခံချက်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
1. နမူနာ diode လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားစက်အတွက်စျေးနှုန်းနိမ့်၊ ဖြန့်ဖြူးသူများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်း
အချိန်ဖြန့်ဝေခုနှစ်တွင်3။
4. အရည်အသွေးမြင့်အာမခံချက် ..
ဘာဖြစ်သလဲ diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေး ကုသမှုလား။Laser Hair Removal Machine Cost သည်မြင်နိုင်သောအနီအောက်ရောင်ခြည်မှအလင်းရောင်အားညီညွတ်စွာထုတ်ပေးသော Semiconductor နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ဤထူးခြားသောလက္ခဏာများသည် diode လေဆာရောင်ခြည်ကိုလေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်သင့်လျော်သောနည်းပညာဖြစ်ပြီးအရေပြားနှင့်ဆံပင်အမျိုးအစားအားလုံးအားဘေးကင်းလုံခြုံပြီးထိရောက်စွာကုသနိုင်သည်။
လေဆာရောင်ခြည်အလင်းသည်ဆံပင်သားပေါက်ခြင်းများကိုအမြဲတမ်းပျက်စီးစေပြီး ၄ င်း၏ကြီးထွားမှုအလားအလာကိုထပ်မံတားဆီးသည်။ Diode လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားမှုကုသမှုမှာလေဆာရောင်ခြည်ဟာတက်ကြွစွာကြီးထွားလာတဲ့ဆံပင်ကိုသာသက်ရောက်တယ်။ လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းသည်ဆံပင်ကိုအမြဲတမ်းဖယ်ရှားနိုင်သည်ဟုမကြာခဏယူဆလေ့ရှိသည်။
နောက် ၇-၁၀ ရက်အတွင်းနေရောင်ခြည်ဒဏ်မှကာကွယ်ခြင်း။
ရှေ့သို့ အမျိုးသမီးများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ CE ဆံပင်ဖယ်ရှားစက် / ယောက်ျားအတွက်အမြဲတမ်းဆံပင်ဖယ်ရှားစက်
နောက်တစ်ခု: Medical CE သည်ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းလေဆာစက် / အကောင်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားစက်ကိုဝယ်သည်
Medical CE ဆေးမရှိသောဆံပင်ဖယ်ရှားစက် / လေဆာ ...
Medical CE မှဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းလေဆာစက်နှင့် ၀ ယ်သည်။
Medical CE အကောင်းဆုံးလေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ / shrd...
Medical CE ipl လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေး handset / အကောင်းဆုံး ...
Medical CE လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားမှုဆံပင် / လေဆာရောင်ခြည် ...
အမျိုးသမီးများအတွက် / နာကျင်မှုအတွက် Medical CE ဆံပင်ဖယ်ရှားစက် ...
လိပ်စာ： မဟုတ်ဘူး။ ဇုန် ၂၊ Mafang စက်မှုဥယျာဉ်၊ Pinggu Park၊ Zhongguancun သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဥယျာဉ်၊ Pinggu ခရိုင်။